Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ ahụ, VOL II. | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ. Mpịakọta 2
Na ngwụsị izu gara aga, onye òtù ọlụlụ m MAD mụbara ọkụ ahụ site na ibipụta akụkụ mbụ nke Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ. Taa, ọ bụ oge m ịgbago na iti mkpu na mbara igwe megide egwuregwu vidiyo ise ewepụtara n'oge ọgbọ a. N'ezie, ụzọ m ga - esi dị iche na nke ahụ bụ na egwuregwu ndị, mgbe ị ga - awụlikwa elu ị ga - ahụ, nwere ike ọ gaghị abụ okwu kachasị njọ, mana ha agbanweela nnukwu ọdịda gbara gburugburu na atụmanya buru ibu, mmefu ego na ụzọ.
Ya mere, o yikarịrị ka ụfọdụ n'ime gị enwerela aha ndị edepụtara n'okpuru. N'ihi ya, echere m na ọ dị mkpa ịkọwapụta na, ọ bụrụ na anyị eleba anya na katalọgụ ndị e bipụtara ugbu a, ọ ga-adị mfe ịchọta ihe ruru unyi na-esote egwuregwu ndị m ga-ekwu maka ha ga-abụ ọkaibe. Anyị agaba.
Ikpeazụ Fantasy XIII
O meela ọtụtụ afọ ugbu a. Ọtụtụ afọ agafewo kemgbe Square Enix furu isi ugwu ya na aha izizi ya. Kedu ihe nwere ike ịbụ saga-J-RPG kachasị ewu ewu na akụkọ ntolite na-efunahụ nhọrọ, ọkwa nkata na, n'ozuzu, ịdị mma site na mmali na oke. Final Fantasy XIII bụ ụzọ ọzọ na mbibi a na-emebi emebi.
Nyochawa ya, ọ na-ele anya ma dị oke mma. Mana o yikarịrị ka nke a ọ bụ n'ihi nhazi a kpaara ókè, ụdị dị iche iche na mmekọrịta ha na ha. N'iburu isiokwu ahụ n'isi, anyị nwere ike ịsị na maka ọtụtụ egwuregwu anyị ga-agagharị na paseeji, na-ezute mkpụrụedemede dị larịị ma na-egwu esemokwu dị oke mkpa. Onweghi ihe m chetara FF VII na onye mbido ya, Lightning, bụ obere ihe anyị ga-ahụ n’isi ya.
Emechara m mechaa nkebi nke mbụ nke saga a ma ama. Ma ọ bụ ezigbo ihe ịga nke ọma maka ebumnuche ole na ole. AC mbụ bụ egwuregwu dị oke ogologo ma dịkwa oke ọnụ iji mezue n'ihi nkwughachi nke atụmatụ aghụghọ. Obere ọrụ dị iche iche na ihe niile emegharịrị na aka ugboro ugboro ruo mgbe ị na-anya ụra.
Otu akụkụ ọrụ aka pụtara ìhè na nnọchi anya nka yana akụkọ dị mma mere na egwuregwu ahụ abụghị ihe nzuzu zuru oke n'ihi ihe anyị tụlere. Nchịkọta zuru oke nke eluigwe na ala na-arụ ọrụ n'ezie nke nwere ike inye ọtụtụ, ọtụtụ karịa onwe ya. Na ihu ọma, Ubisoft mụtara ihe ya wee weta ọtụtụ ihe ọhụụ dị egwu na usoro ndị ọzọ na-esote.
"Halo nke Ps3". Nke ahụ bụ ihe a na-ekwu maka nke a Haze ogologo oge tupu ọ kụọ ụlọ ahịa na anyị nwere ike itinye ya na njikwa. Na ndị okike ya bụ ndị mmepe nke TimeSplitters nwere ike ime ka mmadụ chee na nkwupụta a abụghị ihe nzuzu ma na-eme ka atụmanya banyere onye a gbara egbe nke Sony yiri ka ọ nwere ntụkwasị obi dị ukwuu.
Arbịarute na otu n'ime oge ala nke Ps3 mere ndị ọrụ ka ha rapara na ntu a na-enwu ọkụ dị ka egwuregwu nke ga-agbake ihe nkasi obi nke Sony ma hapụ akara ya na ụlọ ọrụ ahụ. Ma ọfụma, anyị enweghị ike ikwu na nke ikpeazụ anaghị emezu. Gịnị kpatara ya? Maka ihe nzuzu nke mechara bido na ọrụ nke, na akwụkwọ, na-atọ ụtọ nke ukwuu. Haze mechara bụrụ salad ahụhụ, ezigbo injinịa arụ ọrụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ AI, yana njikwa dị arọ.
Onye bi na ya Ọjọọ 6
Ọ bụrụ na Final Fantasy bụ flagship saga nke J-RPG, Resident Evil kemgbe, ya na Silent Hill, otu ihe na Survival Horror. Ruo mgbe nke atọ gụrụ nkeji nkeji egwuregwu soro yiri nnọọ owuwu na ha niile bụ pụtara ìhè egwuregwu. Nke nta nke nta, na nke anọ na nke ise, ọ tụgharịrị gaa n'omume mana a ka na-ekesa usoro ihe nkiri ahụ dabere na akụkụ ya.
Capcom nwere obi uto banyere uzo nke isii a na ndi otu ihe ruru ndi mmadu 600 na aru oru ya yiri ihe na-egosi na anyi na-eche oru nke onu ogugu. Ọ bụ eziokwu na mgbakwunye nke mkpọsa dị iche iche nke jikọtara ọnụ enweela ihe ịga nke ọma na, n'eziokwu, egwuregwu ahụ bụ egwu egwu zuru oke. N'ihi gịnị? N'ihi na mmadụ na-atụ ụjọ n'ezie maka ọdịnaya nke Resident Evil 6 na-enye, ya na mkpụrụedemede na-atọ ọchị, ihe ndị na-adịghị mma na ndị na-enweghị atụ na ngalaba ọrụ teknụzụ jupụtara na chiaroscuro. Ọ bụrụ n ’ihe niile anyị gbakwunye na mkpọsa ugboro ugboro na njedebe na ụdị dịgasị iche iche na-enweghị isi, anyị nwere nke kachasị Onye Ọjọọ Ọjọọ gụrụ ruo ugbu a.
Egwuregwu Ubisoft a bụ otu n'ime ube n'oge mbido Wii na ahịa. N'oge ngosi ya na vidiyo nkwado egwuregwu ahụ kwere nkwa iji nnukwu ikike Wiimote na Nunchaku mee ihe ọnụ. Echiche nke inwe ike iji mma agha na-enweghị onwe ya dị nnọọ mma na imepụta egwuregwu nke egwuregwu ahụ mara mma n'ezie.
O di nwute, mgbe ntinye batara, njikwa egwuregwu nwere oke oke ma megharia karịa ka ekwere na mbu. Ọ bụrụ na nke ahụ, anyị na-agbakwunye usoro zuru oke na ihe isi ike efu, anyị na-eche nnukwu ndakpọ olileanya ihu na otu n'ime ụdị obere Nintendo console. Dika odi, nkeji nke abuo mere ka ihe obula di nma.
Daashi: GTA IV na Uncharted 3
Egwuregwu abụọ ikpeazụ a anyị ga-arụtụ aka bụ abụọ n'ime egwuregwu kachasị elu nke ọgbọ na akụkọ ihe mere eme. Ọbụna na-emebiga ihe ókè, ọ ga-abụ nzuzu ikowe ha akara nke "egwuregwu kacha njọ n'ọgbọ" mana ha pụtara ụzọ nnukwu ndakpọ olileanya na ọpụpụ nke ọ bụla. Ihe abuo nke nnukwu sagas gbara ya gburugburu site na olile anya di uku.
GTA IV Ọ bụ enweghị obi abụọ efu “isi” GTA na usoro nke ọdịnaya na playable dịgasị iche iche. The ego nke playable ọcha hapụrụ mgbe na-agafe site San Andreas bụ obi ọjọọ na egwuregwu na-adabere na ihe pụtara ìhè oru na physics engine na a akụkọ na-azọrọ na e ọchịchịrị na ndị ọzọ tozuru okè na mechara bụrụ a otiti nke cliches hụrụ na genre. . Luckily, GTA V yiri ka ọ chọrọ idozi ihe niile mehiere na nkeji nke anọ a. Otu n’ime ndị kasị njọ n’ọgbọ? Ọbụghị ncha ncha. Egwuregwu kachasị mma dịka ndetu kwuru? Ugbu a ebe a nso.
N'ikpeazụ, na imecha, agafetụbeghị 3, nke atọ ite saga nke starring na-adọrọ adọrọ Nathan Drake kwere nkwa n'ihu mma ihe bụ ikekwe otu nke kasị mma njem egwuregwu na akụkọ ihe mere eme na otu nke teknuzu ọrụ ebube nke ọgbọ. O mechara doo anya na ọ bụ "B team" Naughty Dog rụrụ ya na ihe anyị hụrụ bụ egwuregwu nke na-emeghị ka ọ dị mma ma ọ bụ melite akụkụ nke abụọ ma ọlị, ọ dọkpụụrụ nnukwu nsogbu na oghere edemede wee bụrụ otu ọzọ karịa otu, mana nke ka njọ. Ọ ka bụ egwuregwu akwadoro ma, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ bụ ihe kachasị njọ nke saga.
Ruo ugbu a nyocha anyị banyere ihe, maka anyị, bụ "egwuregwu kacha njọ nke ọgbọ." Onye ọ bụla na ha obibia, anyị na-ekwu banyere
Ozi ndị ọzọ - Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ na MVJ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ. Mpịakọta 2
Ndepụta Ọhụrụ Xbox
Audio n'ọdụ ụgbọ mmiri Samsung DA-E750, ọkà okwu na agụụ tube ampilifaya